MA DOONAYO: Cristiano Ronaldo Oo Diiday Tababare Ay Juventus Doonaysay Inay Magacawdo & Laba Tababare Oo Uu Midkood Doonayo Oo La Ogaaday. - Gool24.Net
Weeraryahanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo warramayaa inuu qayb ka qaadanyo qorshayaasha kooxdiisu ay ku doonayso tababare kale oo shaqada ka bedela Maxi Allegri oo dhawaan bixitaankiisa la shaaciyay.
Waxa xaqiiq ah oo uusan shaki ku jirin in maamulka sarre ee kooxda Juventus ay xisaabta ku darsan doonaan soo jeedinta Ronaldo maadaama oo uu yahay ciyaartoyga la doonayo in koox xoogan laga garab dhiso.
Tababarihii hore ee Juventus ee Antonio Conte oo lagu soo warramayo inay Juve doonaysay inuu shaqada ka bedelo Allegri ayuu Ronaldo ku gacan saydhay go’aankaas sida uu sheegayo wargeyska La Repubblica.
La Repubblica ayaa sheegaya in saxaafadu ay Ronaldo weydiisay waxa uu ka qabo haddii Juventus ay dib u magacawdo tababaraheedii hore isla markaana uu bixiyay calaamad muujinaysa diidmo.
Taa bedelkeeda CR7 ayaa kooxdiisa la doonaya inay magacawda laba tababare midkood sida laga soo xiganayo il wareedka Libero waxaana ay kala yihiin Carlo Ancelotti iyo Maxi Allegri.
Ancelotti iyo Mourinho ayay labaduba Ronaldo kusoo maamuleen kooxda Real Madrid ee wakhtigii guulaha badnaa ee uu 34 jirkani kusoo qaatay caasimada Spain.
Ancelotti ayaa haatan ah tababaraha kooxda Napoli oo ay xifaaltamayaan Juventus halka Mourinho uu ku jiro xaalad shaqo la’aan ah tan iyo markii laga caydhiyay Manchester United bishii December.
Ronaldo ayay Mourinho markii ugu dambaysay ee ay wada shaqeeyeen ku kala tageen qaab aan wanaagsanayn maadaama oo uu Mourinho xaalad xun ku abuuray guud ahaan qolka labiska ee Real.
Dhinaca kale in Mourinho uu soo maamulay kooxda Inter Milan ee ay cadaawaa weyni kala dhaxayso Juventus ayaa ah mid u diidi karta inuu tababare ka noqdo Allianz Stadium xilli ciyaareedka dambe.
Ugu dambayn, Haddii ay Juventus si rasmi ah liiska tababaraysha ay doonayso ay uga saarto Conte ayay ka faa’idaysan doontaa Inter oo iyadu doonaysay inay ku bedesho tababare Luciano Spalletti.